Gudbi warbixin iyo cabasho ku saabsan takoorid | DO
Hey'adda gardoonka takoorka ee DO waxey qaabileysaa warbixin/talooyin iyo cabashoo ku saabsan takoorka, khatar ugu jiridda takoorka iyo dayacaad ka jirta shaqada ka hortagidda takoorka ee shaqa bixiyayaasha iyo ururrada qabanqaabiyo waxbarashada.
Taladaada/warbixintaada ama cabashadaada waxey muhiim u yihiin shaqadeenna ka dhanka ah takoorka. Haddii aad macluumaadkaaga noo soo gudbiso waxaan qeexi karnaa dhibaatooyin ka jira qeybo kala duwan oo bulshada ka mid ah oo aan u baahannahay in aan wax ka qabanno si aan u derdergelinno horumarka, siinta talooyinka iyo in aan sare u qaadno aqoonta ku saabsan khatarta takoorka, ama meelaha aan ubaahannahay in aan saameyn ku yeelanno sharciyada ka yaal.
Calashaan waxaan warbixinta u isticmaaleynaa in aan siyaabo kala duwan u xaqiijinno in sharciga la raaco, laakiin muhiimadeenna koowaad ma ahan in aan xallino xaalado la xirriira shakhsiyaad. Warbixinta waxey qeyb ka noqoneysaa wax loogu magacdaray baaritaan ka-warheyn iyo, in kiisas yar oo ka mid ah ey noqdaan in borosees maxkamadeed loo gudbiyo.
Kuwo yar oo ka mid ah warbixinta iyo cabashooyinka ayaa noqon doona in baaritaan laga sameeyo kadibna go'aan laga gaaro.
Waxaad warbixin iyo cabasho ku gudbin kartaa adiga oo isticmaalaya bogga internetka ee Hey'adda gardoonka takoorka ee DO. Foomka wuxuu ku qoran yhay af iswiidhish laakiin waxaad ku qori kartaa luqadda aad rabto.